Jalini (जालिनी) | TheatreHub
Design and Direction Dayahang Rai
Story/Playwright Dhruba Satya Pariyar
Staged from Sept. 14, 2018 to Oct. 7, 2018
लोककथा शैलीको कथा हो, जालिनी । राजारानी, राजकुमार–राजकुमारी, वीर–वीरांगना, बुद्धिमान महिला तथा वृद्धवृद्धा र चतुर बालबालिकाको कथा, अलौकिक पात्र, परिवेश वा घटना, नीति शिक्षा लोककथाको विशेषता हो । लोककथा वा पौराणिक कथाले लोकविश्वास, अन्धविश्वास, धार्मिक चिन्तन वा अनुष्ठान बोलेको हुन्छ । हाम्रो मानसिकता निर्माण हुनुमा पनि लोककथा, पौराणिक कथा, किंवदन्ती वा धर्म–संस्कृतिको भव्य भूमिका हुन्छ । ‘जालिनी’ मेरो कथासङ्ग्रह ‘कैरन’भित्रको एउटा कथा, जसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ– चित्रशाला ।
कुनै कालखण्डमा स्त्रीका नैसर्गिक अधिकार, स्वतन्त्रता, सपना र विवेकलाई कसरी घर वा पर्खालभित्र कैद गरियो ? शासक, उसका मतियार र आसेपासेले कसरी कुसंस्कार पनि निर्माण गरे ? उनीहरूले कसरी एउटा वर्गलाई भूमिहीन र दास बनाए ? त्यसले आजको समाजलाई के–कति असर गरेको छ ? यसबारे आजका मानिसलाई सोच्ने बनाउनु जालिनी कथाको ध्येय हो । कथा वा कथानक आफैंमा चित्र होइन, त्यसले तपाईंको मस्तिष्कमा कुनै चित्र दिने हो । निश्चय नै, त्यो चित्र वा दृश्य कथाले भन्दा बढी नाटकले दिन्छ ।ढुङ्गालाई मूर्तिमा ढाल्नुजस्तै हो, कथालाई नाटकमा ढालेर मञ्चन गर्नु । यो कथालाई नाटकमा ढाली मञ्चन गर्न निर्देशक, मञ्च र नेपथ्यका रङ्गकर्मीहरूको विशेष रियाज छ । जालिनी कथालाई नाटकमा ढाल्ने सबै रङ्गकर्मीप्रति आभारी छु ।
‘कैरन’ कथा संग्रह पढिसकेपछि म भित्र धेरै कथाका धेरै दृश्यहरु चल्मलाउन थाले । सीधै नाटक बनाउँछु भन्ने लाग्यो तर कुन कथामाथि नाटक बनाउने भन्ने निश्चित भइसकेको थिएन । ध्रुवसत्यसँग पुरानै संगत भए पनि मेरो योजना सुनाउन आँट गरिन किनभने ध्रुवसत्यले जे भन्नु थियो उसले भनिसक्यो । अब मैले अर्को माध्यमबाट भन्दा त्यसरी नै स्पष्ट भन्न नसकुलाँ । आफुलाई रोकेर बाँधेर राखे ।तर मेरो भोगाइ र चेतले भनिरह्यो – नाटकको माध्यमबाट पनि त्यो कथाहरु भन् । फेरि कथाहरुबाट एउटा कथा छान्न थाले र हामी मण्डला टिमले छान्यौ ‘जालिनी’ ।
अनि ध्रुवसत्यलाई आँट गरेर भने — नाटक बनाउन मन लाग्यो । उसले पनि, ‘हुन्छ’ भन्यो र फेरि मैले थपे — यसलाई नाटक बनाउनु पर्छ, नाटक तिमीले बनाउनु पर्छ । उसले भन्यो — मैले त नाटक सोचेकै छैन कसरी बनाउने ?, ‘चिन्ता नगर हामी बसेर बनाईहाल्छौ नि । लेखकहरुले नाटक पनि लेखिदिन पर्यो ।’ यसो भनेर उच्काए, ऊ पनि हौसियो । एक किसिमले नाटक लेखिदियो । कलाकार साथीहरुसँग छलफल गर्दै निक्कै लामो प्रक्रियाबाट बन्यो जालिनी ।यो समय र साथको लागि मण्डला परिवार, लेखक ध्रुवसत्य, साथी कला अनुरागी र सबै कलाकार साथीहरु प्रति आभारी छु ।
Old lady Sirjana Subba
Jaljala Sirjana Subba
King Jayasthiti Malla Bijay Baral
Lady Binita Gurung
Jalini Binita Gurung
Prime Minister Ingi Hopo Koinch Sunuwar
Jayan Pushkar Karki
Astrologer Sagar Dahal Bikash Panta Sanjib Rai Dipak Pachhaldangya
Susare Pramila Khanal Shaku Shah
Army Sudip Khatiwada Bikram Shrestha Rijan Pariyar Kabiraj Rai Sabin Ghalan Debin Chaudhary
Stage Design Rajan Khatiwada
Light Design Rajan Khatiwada
Stage Construction Sudip Khatiwada Bikash Shrestha Pushkar Karki
Stage Props Bikash Panta Sanjib Rai Kabiraj Rai Debin Chaudhary
Light Operator Anup Neupane
Technical Support Anup Neupane Sabin Ghalan Rijan Pariyar
Sound Craft Kiran Chamling Rai
Sound Operator Dipesh Kafle
Choreographer Sirjana Subba Pramila Khanal
Costume Sirjana Subba Binita Gurung Shaku Shah Dipak Pachhaldangya
Poster Sketch Umesh Chaudhary
Stage Hands Sunil Tamang CK Bista
House Manager Nabina Aryal
Marketing Manager Rijan Pariyar Pramila Khanal
Finance Manager Pushkar Karki
Ast. Stage Manager Rijan Pariyar
Stage Manager Ingi Hopo Koinch Sunuwar